Kusukela Ekuhlukunyezweni Kuphuma Amakha Othando | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
2018-04-15 19:36:46 17
UXiaokai, Esifundazweni saseJiangxi
Ngingowesifazane ojwayelekile wasemaphandleni futhi, ngenxa yombono wokukholelwa ekutheni abantwana besilisa kuphela ababalulekile, ngangingakwazi ukuphakamisa ikhanda lami phambi kwabanye ngenxa yehlazo lokuthi angizalanga umfana. Kuthe ngale nkathi ngihlupheka kakhulu, ngakhethwa yiNkosi uJesu futhi, ngemva kweminyaka emibili, ngamukela insindiso kaNkulunkulu uSomandla. Ngaphezu kwalokho, ngaqonda kakhulu iqiniso elivela emazwini kaNkulunkulu uSomandla yase inhliziyo yami ithola ukukhululeka kwangempela. Nokho, lapho ngenza umsebenzi wami wokukhokhela uthando lukaNkulunkulu, ngaboshwa kabili nguhulumeni we-CCP futhi ngathola ukuhlukunyezwa nokuhlushwa ezandleni zababesetshenziswa yi-CCP. Lapho nje sengisethunzini lokufa, amazwi kaNkulunkulu uSomandla angiqondisa futhi angikhuthaza futhi angenza ngafakaza phakathi nokulinyazwa ngonya uSathane, ngalokho aqinisa ukuzimisela kwami ukulandela uNkulunkulu nokuthanda uNkulunkulu ngakho konke ukuphila kwami.
Ngazalelwa emaphandleni futhi, ngemva kokushada, ngazala amadodakazi amathathu, ngokulandelana. Ngenxa yombono oqine kakhulu ezindaweni zasemakhaya wokukholelwa ekutheni abantwana besilisa kuphela ababalulekile, umndeni kanye nabantu basendaweni bonke babengibukela phansi, futhi ngaphezu kwalokho, odadewabo myeni wami babengixhaphaza futhi behlekisa ngami. Ngezwa ubuhlungu obukhulu nokucindezeleka ngaphakathi; ngazizwa ngicindezelekile usuku lonke. Ngo-1998, ngaqala ukukholelwa kuJesu futhi, nakuba ingqondo yami eyayicindezelekile ngaphakathi kothando lweNkosi uJesu, ukungakhululeki enhliziyweni yami kwakuselokhu kukhona. Ngemva kweminyaka emibili, ngemukela insindiso kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina futhi, lapho ngifunda la mazwi kaNkulunkulu, afana nomuthi owelapha ukugula okungapheli: “Kusukela ekudalweni kwezwe ngiye ngaqala ukunqumela kusengaphambili kanye nokukhetha leli qembu labantu, okungukuthi, nina namuhla. Isimo senhliziyo, izinga, ukubonakala, isiqu, umndeni enizalelwe kuwo, umsebenzi wenu kanye nomshado wenu, konke okwenu, ngisho nombala wezinwele zenu nesikhumba senu, kanye nesikhathi sokuzalwa kwenu konke kwahlelwa yizandla Zami” (“Izwi Lamashumi Ayisikhombisa Nane” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). La mazwi kaNkulunkulu angenza ngaqonda ukuthi zonke izinto kanye nezehlakalo kusezandleni zikaNkulunkulu, ukuthi ukudalelwa kwami kwahlelwa uNkulunkulu kudala kanye nokuthi ukuba kwami namadodakazi amathathu nakho kwanqunyelwa kusengaphambili uNkulunkulu, nokuthi yilokho okwaba okungcono ngokubona kukaNkulunkulu. Ngakho ngangingekho ngaphansi kwezibopho zemibono yenkolelo, futhi inhliziyo yami yathola ukukhululeka okukhulu. Kusukela ngalolo suku, ngaphila impilo yebandla ngenkuthalo, ngalambela ukufunda amazwi kaNkulunkulu, ngajabulela ukuphila okunikezwa amazwi kaNkulunkulu uSomandla, futhi kancane kancane ngaliqonda kabanzi iqiniso, elinjengokuthi uSathane umonakalisa kanjani umuntu, uNkulunkulu umsindisa kanjani umuntu nokuthi kuyini ukubaluleka nobumqoka bokuphila komuntu. Ngokuqonda lezi zinto, inhliziyo yami yazizwa inokuthula futhi igcwele ukukhanya, njalo ngaba nokujabula engingenakukwazi ukukuveza ngamazwi, futhi ngokwengeziwe ngafinyelela ekukholelweni ngokuqinile ekutheni uNkulunkulu uSomandla ungukuphela kukaNkulunkulu weqiniso oye wangisindisa olwandle lokuhlupheka, futhi ngaba nokuzimisela ukulandela uNkulunkulu uSomandla nangokuphila impilo engokoqobo. Ngemva kwesikhathi esifushane, uNkulunkulu wangiphakamisa ngaba umholi webandla. Ngesikhathi ngenza umsebenzi wami, nokho, ngaboshwa kabili uhulumeni we-CCP futhi ngashushiswa ngonya …
Cishe ngo-5 ntambama, ngo-Meyi 2003, ngangisendleleni ngiya ukuyokwenza umsebenzi wami lapho ngokungalindelekile unobhala wekomiti lendawo efika ngesithuthuthu futhi evimba indlela yami. Wabhavumula ebhekise kimi, wathi: “Yeka! Yini lena oyenzayo? Yiza lapha kanye nami!” Ngamangala kakhulu, futhi ngabona ukuthi kade engilandela. Masinyane ngacabanga nge-pager, iziliphu zikakheshi wesonto nezinye izinto ezazisesikhwameni sami nanokuthi, uma lezi zinto sezisezandleni zabo, zizoletha ukulahlekelwa okukhulu emsebenzini webandla. Ngakho ngagijima kakhulu ngangokunokwenzeka, ngethemba lokuthi ngizothola ithuba lokulahla izinto ezisesikhwameni sami, kodwa angizange ngiye kude kakhulu ngaphambi kokuba angibambe. Kungekudala, kwavela imoto emnyama futhi kwaphuma kuyo amaphoyisa amahlanu noma ayisithupha ayebukeka enolaka angikaka masinyane. Bangihleka ngokungibhuqa base bethi: “Saze sakubamba ngempela, ungumholi wehlelo. Ucabanga ukuthi usengasibalekela? Awusoze!” Base besonta ngamandla izandla zami ngemva komhlane wami, bangifaka emotweni yamaphoyisa futhi bangiyisa esiteshini samaphoyisa esiseduze.
Lapho ngifika esiteshini samaphoyisa, amaphoyisa amabi angihlohlolozela egumbini elincane, elimnyama, elinephunga elibi, futhi aqala ukuba nolaka kimi: “Khuluma iqiniso! Ubani igama lakho? Uvelaphi? Yini oyenzayo lapha? Khuluma!” Inhliziyo yami yashaya ngamandla, ngibona ukwesabisa kwawo, futhi ngesaba ukuthi izinto ezisesikhwameni sami zingase ziwele ezandleni zawo, futhi ngangesaba ukuthi azongihlukumeza ngonya. Ngesikhathi konke lokhu kwenzeka, ngakhala ngempela kuNkulunkulu: “O Somandla Nkulunkulu, namuhla ngiwele ezandleni zawodeveli futhi lokhu kwenzeke ngemvume Yakho. Noma ngabe benzani kimi, ngifisa kuphela ukuma Nawe. Ngithandazela ukuhlakanipha nokholo lokufakaza.” Ngaso leso sikhathi, amazwi kaNkulunkulu ezwakala ezindlebeni zami: “Akufanele wesabe lokhu nalokhuya. Kungakhathaliseki ukuthi ubhekene nobunzima kanye nezingozi ezingaki, uyohlala umile phambi Kwami…. Ungesabi; ngokwesekelwa Yimi, ngubani ongake avimbe indlela?” (“Izwi Leshumi” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Yebo ngempela, uNkulunkulu uyingqayizivele. Usebenzisa zonke izinto futhi ubusa yonke into, ngakho ingabe lawa maphoyisa amabi ambalwa awasiyo yini ngisho nenkulu ingxenye yamalungiselelo kaNkulunkulu? Ngokusekelwa uNkulunkulu nangokuba kanye nami, yini enye engingayesaba? Amazwi kaNkulunkulu angenza ngaba nokholo futhi umzimba wami wonke wagcwala amandla, ngangaphinde ngesaba uSathane. Kodwa ngaleso sikhathi, ngangilokhu ngikhathezekile ngezinto ezisesikhwameni sami, futhi inhliziyo yami yanxusa njalo isivikelo sikaNkulunkulu. Ngabonga uNkulunkulu ngokuzwa umthandazo wami, futhi leli qembu lamaphoyisa amabi lamane langiphenya ngemibuzo futhi alizange liphenye isikhwama sami. Lapho kufika isikhathi sokuba ashayise emsebenzini, onke ashiya igumbi, futhi ngokushesha ngathatha iziliphu zezimali kanye nezinto zokholo ezazisesikhwameni sami ngase ngiziphonsa phandle ngefasitela, futhi ngaphahlaza phansi i-pager ngase ngiyiphonsa emgqonyeni wezibi, futhi kungaleso sikhathi lapho inhliziyo yami yathola khona ukukhululeka. Lapho ngiqeda nje ukwenza lokho iqembu elisha lamaphoyisa asanda kungena emsebenzini langena egunjini. Bangibheka kabi, base ngokushesha bephenya isikhwama sami, kodwa abatholanga lutho. Ngazibonela ngamehlo ami amandla onke kanye nobukhosi bukaNkulunkulu, futhi ukholo lwami lwakhula kakhulu. Ngenxa yokuthi abatholanga lutho, amaphoyisa amabi angibuza ngokuthukuthela, engibuza ukuthi ubani ngempela engixhumana naye, obani abaholi abaphezulu, njalo njalo. Ngangesaba ukuthi ngingase ngikhiphe ulwazi oluthile bese ngiwela ogibeni lwabo, ngakho angishongo lutho nhlobo. Ebona lokhu, amaphoyisa amabi ayisihlanu noma ayisithupha eza kimi onke kanyekanye angishaya futhi angikhahlela, engiqalekisa njengoba enza kanjalo, athi: “Uma ungasitsheli, sizokushaya uze ufe!” Ngashaywa kanzima kakhulu ngikhahlelwa njengebhola, ngigingqika phansi ngiye emuva naphambili. Elinye lamaphoyisa amabi lase ngobudlova lingidonsa ngezinwele zami futhi langisongela ngolaka: “Namanje ngempela usanenkani. Ngeke ukhulume? Sinezindlela zethu, ngakho uzobona indlela esizokulungisa ngayo ebusuku!” Ngangazi ukuthi uNkulunkulu wayenami, ngakho ngalindela ukuhlukunyezwa okuzayo ngokuzola kwenhliziyo.
Kwakungemva kuka-8 ntambama ngalobo busuku lapho amaphoyisa amabi amabili engibopha ngozankosi ase engiyisa kumasipala woMnyango Wezokuphepha Komphakathi. Lapho singena egunjini lokuphenywa ngemibuzo, iphoyisa elibi elaliseminyakeni yamashumi amane laqala ngobuqili, lizama ukungiyenga nokungincenga: “Usemusha, futhi umuhle. Yini yonke lento yokukholelwa kuNkulunkulu? Bambisana nomsebenzi wethu. Uma kuphela usitshela ukuthi obani abaholi abaphezulu, ngizothumela othile akuthathe akuyise ekhaya khona manje. Ngingakusiza nganoma yibuphi ubunzima ongase ube nabo. Kungani uhlupheka lapha?…” Ngenxa yokuvikelwa uNkulunkulu, ngazi ukuthi lokhu kuyiqhinga lobuqili likaSathane, futhi angizange ngimnake kungakhathaliseki ukuthi wayethini. Iphoyisa elibi labona ukuthi leli qhinga alisebenzanga, ngakho masinyane labonisa isimo salo sangempela. Langibamba ngezinwele lase lingicindezela phansi, langikhahlela ngonya ikhanda lami ngaze ngaba nesiyezi futhi ngezwa sengathi yonke indawo yayizungeza. Lanyathela ikhanda lami lase ngonya olukhulu lithi: “Awukhulumi? Ngizokhipha onke amaphoyisa ukuze akuhlukumeze namuhla, futhi uzofisa sengathi ngabe awuzange uzalwe. Ingabe uzositshela lokho esifuna ukukwazi?” Ebona ukuthi selokhu angisho lutho, wabiza amanye amaphoyisa amabi ambalwa angihudula ngezinyawo futhi aqala ukungishaya ngezimpama ebusweni bonke ephindelela, kwaze kwaba yilapho ubuso bami buba buhlungu kakhulu kangangokuthi ngezwa sengathi buvutha umlilo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi bebangishaya kangakanani, ngaqhubeka nokuthula ngithandaza kuNkulunkulu, futhi ngahlanganisa amazinyo ami futhi angishongo negama elilodwa. Ngokubona ukuthi ngangingaliphonsi ithawula, bangihudulela kwelinye igumbi, bevutha intukuthelo. Iphoyisa elibi lathatha indukwana kagesi lase lingihleka ngonya, lathi: “Akunandaba ukuthi unenkani. Sinezindlela zethu! Ake sibone ukuthi kuzogcina bani—wena noma indukwana yethu kagesi!” Khona-ke langihlohloloza ngonya ngayo. Ngokuphazima kweso, umzimba wami wonke wase uhlatshwe ngogesi omningi kakhulu futhi ngahlukunyezwa ngokuphoqelelwa. Kwaba sengathi izilokazane eziningi ziluma umzimba wami, futhi ngazithola izikhathi ezimbalwa, ngikhala ngokudazuluka. Ngaphandle kokungilinda ukuba ngiphefumule, elinye iphoyisa elibi lathatha inqwaba yomagazini futhi laqala ukungishaya ngabo ekhanda lami ngamandla alo onke, lase lingidonsa ngezinwele futhi laphonsa ngonya ikhanda lami odongeni. Yonke into yaba mnyama futhi ngawela phansi. Amaphoyisa amabi abhavumula, “Wenza sengathi ufile!” Khona-ke angidonsa engiphakamisa phansi futhi ayala ukuba ngiguqe ngamadolo, kodwa ngangibuthakathaka kakhulu ukuthi ngingaguqa kuphela izikhathi ezimbalwa ngaphambi kokuba ngiphinde ngiwele phansi. Ngaleso sikhathi, ngezwa sengathi ngempela angeke ngikwazi ukuqhubeka nokuzibamba, ngazizwa ngibuthakathaka, futhi ngacabanga: “Labo develi banonya olukhulu ngempela, futhi ngizofela ngempela ezandleni zabo namuhla….” Ngisebuhlungweni futhi ngingenamandla, ngathandaza ngobuqotho obuphelele kuNkulunkulu, ngicela uNkulunkulu ukuba angiqondise, kanye namandla okunqoba uSathane. Ngaso leso sikhathi, amazwi kaNkulunkulu afika engqondweni yami: “UNkulunkulu uSomandla, iNhloko yazo zonke izinto, uphethe amandla Akhe obukhosi esihlalweni Sakhe sobukhosi. Ubusa phezu kwezulu nomhlaba nazo zonke izinto futhi usiqondisa emhlabeni wonke. Siyohlala siseduze Kwakhe…. Uma unomphefumulo owodwa nje, uNkulunkulu ngeke akudedele ufe” (“Izwi Lesithupha” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angenza ngaqonda ukuthi ukuphila kwami kusezandleni zikaNkulunkulu kanye nokuthi, uma nje uNkulunkulu engakanikezi imvume Yakhe, khona-ke labo develi ngeke balokothe bayithathe impilo yami. Ngacabanga indlela engiye ngalandela ngayo uNkulunkulu kuze kube manje, indlela uNkulunkulu aye wangivikela ngayo kuyo yonke indlela, indlela engiye ngajabulela ngayo kaningi nakakhulu uthando lukaNkulunkulu, futhi ngacabanga nokuthi kungani le simo okwenzeke ngaso manje sibe yisikhathi sokuba uNkulunkulu avivinye ubuqotho kanye nothando lwami, nokuthi lokho futhi kube yisikhathi sokuthi mina ngikhokhele uthando lukaNkulunkulu. Odeveli babengihlukumeza sengathi banenhloso eyenyanyekayo yokufuna ukuba ngikhaphele uNkulunkulu; kodwa ngaba umuntu ongahoxi, umuntu onokuzimisela futhi, ngisho noma bengihlukumeza ngize ngife, selokhu ngeke ngizinikele kuSathane. Ngangingeke nhlobo ngibe uJuda ukuze ngiqhubekisele phambili ukuba khona ngiphilele ize—ngeke ngivumele iqhinga likaSathane liphumelele, ngizofakaza ngokuqinile ngoNkulunkulu futhi ngivumele inhliziyo kaNkulunkulu ukuba iduduzeke! Amazwi kaNkulunkulu anginikeza amandla angapheli, ngakhohlwa ubuhlungu obusemzimbeni wami wonke, futhi ngaba nokholo nesibindi sokuqhubeka nokulwa nalabo develi.
Khona-ke ukuze angenze ngivume, amaphoyisa amabi aqala ukushintshana ukuze angigade futhi engivimbela ukuba ngilale, engicindezela ngemibuzo njalo njalo: “Obani abaholi abaphezulu ebandleni lenu? Bahlala kuphi? Ubani omunye oyilungu? …” Ngokubona ukuthi ngangilokhu ngithulile, njalo ayengibamba ngezinwele futhi angikhahlele. Uma nje ngike ngavala amehlo ami ayengishaya futhi engikhahlela esebenzisa ingaphambili lezicathulo zawo zesikhumba ukunyathela nokugaya amaqupha ami ngamandla awo onke. Ubuhlungu obuhlabayo bangibangela ubuhlungu obungachazeki, futhi ngamane ngaqhubeka noklabalasa. Ayengikhahlela njengebhola… Njengoba kwase kuzosa, ngase ngihlukunyezwe kakhulu kangangokuba umzimba wami wawugcwele imihuzuko engenakubalwa futhi usebuhlungwini obungabekezeleleki. Ngicabanga indlela engangingazange ngaphambili ngibhekane nobunzima obunjalo, ngicabanga nangomonakalo kanye nokuhlukunyezwa engangikuzwa manje ezandleni zamaphoyisa amabi e-CCP ngenxa yokukholelwa kwami kuNkulunkulu, inhliziyo yami yezwa usizi kanye nobuthakathaka. Ngaleso sikhathi, konke kwakumnyama ngaphakathi kwami, futhi ukwesaba kwami kwakhula njalo, ngingazi ukuthi luhlobo luni lokuhlukunyezwa ngonya abangibekele lona ngokulandelayo. Njengoba ngangisezinhlungwini, ngathandaza buthule kuNkulunkulu: “O, Somandla Nkulunkulu, ngicela ukuba ungikhanyisele futhi ungihole ukuze ngiqonde intando Yakho ekuhluphekeni kwami, ukuze ngingalahlekelwa ubufakazi bami.” Njengoba ngithandaza, ngacabanga ngeculo lamazwi kaNkulunkulu: “Kufanele uzwe ubunzima ngenxa yeqiniso, kufanele uzinikele ngenxa yeqiniso, kufanele ukhuthazelele ukuthotshiswa ngenxa yeqiniso, futhi ukuze uthole iqiniso elengeziwe kufanele wedlule ekuhluphekeni okwengeziwe. Yilokhu okufanele ukwenze. … Kufanele uphishekele konke okuhle nokukahle, futhi kufanele ulandele ngokwengeziwe indlela yokuphila enenjongo. … Kufanele ulahle zonke izinjabulo zenyama ngenxa yeqiniso elilodwa, futhi akufanele ulahle onke amaqiniso ngenxa yenjabulo encane” (“Kufanele Udele Konke Ngenxa Yeqiniso” Kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Amazwi kaNkulunkulu aphaphamisa inhliziyo yami futhi angenza ngaqonda ukuthi ubuhlungu bokushushiswa engangibuzwa manje ngenxa yokukholelwa kwami kuNkulunkulu kwakungokwenani elikhulu kakhulu futhi kubaluleke kakhulu. Ngaqonda ukuthi uNkulunkulu wayesebenzisa lesi simo sokuhlukunyezwa ukuze angibonise ngokucacile isimo sikaSathane esinobutha noNkulunkulu, ukuze ngikwazi ukusilahla ngokuphelele futhi ngalokho ngiphendulele inhliziyo yami kuNkulunkulu bese ngifinyelela othandweni lwangempela ngoNkulunkulu. UNkulunkulu kakade wabekezelela bonke ubuhlungu ukuze asindise mina, ngakho akufanele yini umuntu owonakele njengami ahlupheke ngisho nangokwengeziwe ukuze ngithole iqiniso futhi ukuze ngifinyelele oshintshweni lwangempela esimweni sami sokuphila? Lokhu kuhlupheka kufanele ngikukhuthazelele emgomweni wami wokuzuza insindiso, futhi ngidinga lolu hlobo lokuhlupheka ukuze lungikhulise nokuba lungikhuthaze; lokhu yilokho ukuphila kwami okukudingayo futhi ngifisa ukwamukela uthando olukhulu lukaNkulunkulu. Namuhla, ngihlupheka noKristu futhi ngihlanganyela naye kukho kokubili embusweni kaKristu nasekuhluphekeni Kwakhe—lokhu kuwukuphakanyiswa ngokuphelele uNkulunkulu, kuwuthando olukhulu kakhulu lukaNkulunkulu kanye nesibusiso kimi, futhi kufanele ngijabule. Ngicabanga ngalokhu, inhliziyo yami yezwa ukududuzeka okukhulu, futhi ngayeka ukukholelwa ekutheni ukuhlangabezana nalesi simo kwakuyinto ebuhlungu, kodwa ngokuphambene ngezwa ukuthi lokhu kwakuyisibusiso esikhulu sikaNkulunkulu esike senzeka kimi. Ngathandaza buthule kuNkulunkulu: “O, Somandla Nkulunkulu! Noma ngabe uSathane ungihlupha kangakanani, anginakulokotha ngihlehle noma ngizinikele kuyena. Noma ngabe ngiyaphila noma ngiyafa, ngifisa ukuzithoba ezinhlelweni Zakho, ngizinikele ngokuphelele Kuwe, futhi ngithande Wena kuze kube sekufeni Kwami!” Amaphoyisa amabi angihlupha amalanga amabili nobusuku obubili futhi akatholanga lutho nhlobo kimi. Ekugcineni, okuwukuphela akusho kwaba ukuthi ngiye kakade “ngenziwa uNkulunkulu,” ngase ngithunyelwa ejele.
Ngokushesha nje lapho ngingena esitokisini sasejele, inhloko yesitokisi, emva kokuba ishoshozelwe amaphoyisa amabi, yaqala ukungisongela: “Lalela, vuma! Kungenjalo uzohlupheka!” Ngokubona ukuthi anginakuwamukela umbono wakhe, wahlela nezinye iziboshwa ukuba zingijezise nganoma iyiphi indlela engaba khona: Abanginikanga lutho ukuba ngidle, abanginikanga amanzi ashisayo, bangilalisa phansi kusimende obandayo njalo ebusuku, futhi bangenza ukuba ngenze umsebenzi ongcolile, okhathazayo. Uma ngingawuqedile kwakudingeka ukuthi ngisebenze isikhathi esengeziwe, futhi uma ngingazange ngiwenze kahle ngangihlukunyezwa ngamazwi futhi bangijezise ngokuthi bangenze ngime…. Nsuku zonke kwakudingeka ngibhekane nokuhlekwa usulu, ukwehliswa isithunzi, ukubandlululwa, ukushaywa nokuhlukunyezwa ngamazwi ngezinye iziboshwa. Ngaphezu kwalokho, imali yami yayithathwe ngamaphoyisa amabi ngakho, ngaphandle kwemali egameni lami, ngangingakwazi ukuthenga izidingo zansuku zonke. Ngangingazi ukuthi lezi zinsuku ziyophela nini futhi ngaphakathi ngezwa usizi olukhulu, isizungu esikhulu kanye nobuhlungu obukhulu, ngifisa njalo ukuphuma kule ndawo yobudemoni ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kodwa lapho ngifuna ngokwengeziwe ukuphuma kulesi simo, inhliziyo yami yayiba mnyama futhi icindezeleke ngokwengeziwe, futhi izinyembezi zizehlela emehlweni ami. Ngingenamandla, ngangingatshela kuphela uNkulunkulu ngokuphindelela ngosizi lwami, ngethemba ngobuqotho ukuthi uNkulunkulu uzophinde angihole futhi angenze ngikwazi ukulalela izinhlelo kanye namalungiselelo Akhe. UNkulunkulu uyangisiza futhi angisekele ngazo zonke izikhathi, futhi uphinde asebenzise amazwi Akhe ukuze angikhanyisele nokuba angihole: “Akunandaba ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani noma ukuthi usendaweni enjani, uyokwazi ukulwela ukuphila, ukulwela ukukhula komsebenzi kaNkulunkulu, nokulwela iqiniso. Uyoziqonda izenzo zikaNkulunkulu futhi uyokwazi ukwenza ngokuvumelana neqiniso. Lolu ukholo lwakho lwangempela, lokhu kubonisa ukuthi awulilahlile ithemba kuNkulunkulu. Usazolifuna iqiniso ngesikhathi sokucwengwa, uyokwazi ukumthanda ngempela uNkulunkulu futhi ngeke umngabaze. Akunandaba ukuthi wenzani, usazolenza iqiniso ukuze wanelise Yena, uyokwazi ukuyifuna ngokujulile intando Yakhe futhi ucabange ngentando Yakhe. Yilokhu kuphela okuwukholo lweqiniso kuNkulunkulu. Phambilini, lapho uNkulunkulu ethi uyobusa njengenkosi, wawumthanda, lapho ezembula obala kuwe, wawumfuna. Kodwa manje uNkulunkulu ufihlekile, awukwazi ukumbona, futhi wehlelwa izinkinga. Ngalesi sikhathi, liyakulahlekela yini ithemba kuNkulunkulu? Ngakho ngazo zonke izikhathi kumele ulwele ukuphila futhi ufune ukufeza intando kaNkulunkulu. Lokhu kubizwa ngokuthi ukholo oluqotho, futhi kuwuhlobo lothando oluyiqiniso noluhle kunalo lonke” (“Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu ayefana nomama onothando ethulisa ingane ecindezelekile, futhi anginikeza induduzo nesikhuthazo. Ngezwa sengathi uNkulunkulu wayeseceleni kwami engibhekile futhi elindele ukuba ngikwazi ukulondoloza ukholo lwami lweqiniso kuNkulunkulu ngaphambi kukaSathane, ngikhuthazelele ubuhlungu ngokuthula ukuze ngikwazi ukuthanda nokwanelisa uNkulunkulu phakathi kwezimo ezibuhlungu kanye nalapho ngihlaselwe amandla obumnyama, futhi ngifakaze ngoNkulunkulu—lobu ubufakazi obunamandla kakhulu obuhlazisa uSathane. Nakuba ngangibanjwe kulo mphandu wodeveli, uthando lukaNkulunkulu lwalulokhu lukanye nami. Lapho ngibhekene nokuhlukunyezwa ngonya kanye nokuhlushwa futhi ngizizwa ngibuthakathaka, nalapho ngikhuthazelela ukuhlaselwa uSathane futhi ngizwa ubuhlungu nokucindezeleka, ngaso sonke isikhathi ngangibona ilungiselelo likaNkulunkulu ngokuphila kwami, ngangizwa induduzo yothando lukaNkulunkulu, futhi ngangibona isandla sikaNkulunkulu singivulela indlela yokuphuma. UNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ungasohlangothini lwami, ngacabanga, uyanginakekela futhi ukanye nami. Uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu, kungenzeka kanjani ukuba ngidumaze intando Yakhe? Akudingeki ukuba nginake inyama yami nokuba ngizame ukubalekela izimo uNkulunkulu angihlelele zona. Kudingeka ngikhumbule ukholo enganginalo ngaphambili, nginikele uthando lwami lweqiniso kuNkulunkulu futhi nginikeze ubufakazi ngoNkulunkulu ngaphambi kukaSathane. Ngokucabanga ngalezi zinto, ubuhlungu enhliziyweni yami baphela, futhi ngazimisela ukuthanda nokwanelisa uNkulunkulu ngisho noma ngibhekana nabo bonke ubuhlungu. Ngazithola sengicula iculo lokuhlangenwe nakho: “Ngenhliziyo nangomoya, kungani umuntu angeke amthande uNkulunkulu? UNkulunkulu uyangisekela, yini-ke engingayesaba? Ngazimisela ukulwa noSathane kuze kube sekugcineni. UNkulunkulu uyasiphakamisa futhi kufanele sishiye yonke into ngemuva futhi sihlanganyele ekuhluphekeni kukaKrisu. Ngalungisa uthando nokuzinikela kwami konke kuNkulunkulu, futhi ngeza noNkulunkulu enkazimulweni. UMoya kaNkulunkulu ufihlekile enyameni, futhi usebenzile futhi wasihola isikhathi eside. Ngenza isifungo sokunikezela inhliziyo nomzimba wami wonke, futhi ngikhokhele uNkulunkulu ngomzamo wokuzikhandla nokhathazayo (“Umbuso” Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Lapho ngiqinisa ukholo kanye nesifiso sami sokwanelisa uNkulunkulu, ngaphinde ngezwa uthando olunesisa lukaNkulunkulu ngami. UNkulunkulu wahlela ukuba isikhulu sejele singinikeze izinto eziningi zokusetshenziswa nsuku zonke. Inhliziyo yami yathinteka futhi ngabonga uNkulunkulu ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngemva kwezinsuku ezingama-40, amaphoyisa amabi abona ukuthi akanandlela yokuthola lutho kimi, ngakho angibeka amacala angenasisekelo okuba “yilungu lehlelo,” ase ecela umndeni wami ukuba ukhokhe izinkulungwane ezimbalwa zama-yuan ngaphambi kokungikhulula.
Ngacabanga ukuthi ngizophinde ngithole inkululeko yami lapho ngibuyela ekhaya, kodwa amaphoyisa e-CCP akazange ayeke ukungigada futhi ayelokhu eyibekele imingcele inkululeko yami. Angenqabela ukuba ngiphume endlini yami, ayalela ukuba ngaso sonke isikhathi ngitholakale uma engifuna, futhi athumele othile ukuba azongibheka. Ayeze ngisho asongele umndeni wami cishe njalo ngemva kwezinsuku ezimbalwa, ewuxwayisa ukuba unginakisise. Ngaphandle, kwakubonakala sengathi ngikhululiwe, kodwa ngangiboshelwe endlini ngamaphoyisa amabi. Ngakho angizange ngizame ukuxhumana nabafowethu nodadewethu ebandleni, noma ukwenza umsebenzi wami, futhi inhliziyo yami yacindezeleka futhi yaba buhlungu kakhulu. Into eyangenza ngathukuthela ngisho nakakhulu ukuthi amaphoyisa amabi ayekhohlisa abantu endaweni ngamanga awo amabi, ebatshela ukuthi ukukholelwa kwami kuNkulunkulu kungenze ngahlanya, ukuthi kunokuthile okungalungile ekhanda lami nokuthi ngangingenza noma ngabe yini…. Naphezu kwalokho kuziphatha okubi njengoba ayefafaza amahlebezi nokunyundela, ngazithola ngikuvumela ukuba kubhebhethekise intukuthelo yami. Kwakungafanele ngilawulwe odeveli ngale ndlela, futhi kwakufanele ngilwe ukuze ngizikhulule ezidladleni zabo zobudemoni bese ngikhokhela uthando lukaNkulunkulu. Futhi, ukuze ngibalekele ukugadwa amaphoyisa amabi, ngangingenayo enye indlela ngaphandle kokushiya ikhaya bese ngihamba ngiyokwenza umsebenzi wami.
Iminyaka emithathu yedlula ngokuphazima kweso. Ngacabanga ukuthi amaphoyisa e-CCP ngeke asangigada, ngakho ngabuyela ekhaya ukuze ngiyokwenza umsebenzi wami. Nokho, kwenzeka okungalindelekile lapho, ngolunye usuku ekuseni ngo-Agasti 2006, ngaphambi kokuba ngibe sekhaya ngaphezu kwezinsuku ezimbalwa nje, amaphoyisa amabi angivakashela. Ngalolo suku, ngavuswa yizwi eliklabalasayo elangithusa ngisesebuthongweni: “Sheshisa uvule umnyango, ngoba kungenjalo sizowubulala!” Umyeni wami wayesanda nje kuvula umnyango lapho kungena amaphoyisa amabi ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili njengabaphangi futhi, ngaphandle kokuchaza lutho, angibamba ase engidonsela emotweni yawo. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengivikela, angizange ngesabe. Ngamane ngathandaza ngokungaphezi: “O, Somandla Nkulunkulu! Namuhla ngiphinde ngawela ezandleni zalabo develi. Ngicela uvikele inhliziyo yami, ungiphe amandla, futhi ngicela ukuba ngiphinde nginikeze ubufakazi Ngawe.” Lapho sifika esiteshini samaphoyisa, amaphoyisa amabi angithatha isithombe nezinyathelo zeminwe yami ngenkani. Ase ethatha uhlu lwamagama futhi aqala ungikucindezela ngemibuzo: “Ingabe uyabazi laba bantu? Obani osebenza nabo?” Ngibona amagama ajwayelekile abanye odadewethu ohlwini, ngaphendula ngokungajahi: “Angibazi, futhi akukho engisebenza nabo!” Ngathi ngingakaqedi ukukhuluma elinye lawo labhavumula, “Unyamalale iminyaka embalwa, ingabe ubukuphi? Unabo osebenza nabo. Ingabe usakholelwa kuNkulunkulu uSomandla? Khuluma iqiniso.” Ekuqaleni amazwi ephoyisa elibi angenza ngadabuka futhi ngacasuka, futhi ngathukuthela ngaphelelwa amagama: Lokho engikukholelwayo namuhla ukuphela kukaNkulunkulu weqiniso owadala amazulu nomhlaba kanye nazo zonke izinto, lokho engikufunayo iqiniso, indlela engiyihambayo iyona ndlela efanele ekuphileni, nokuthi zonke lezi zinto zisobala futhi zilungile. Kodwa nokho labo develi, abangenawo nhlobo unembeza, selokhu bayangilandela, bebekela inkululeko yami imingcele, bangikhiphela ngaphandle kwekhaya lami, bangahlukanisa nomndeni wami futhi bazama ukungiphoqelela ukuba ngikhaphele uNkulunkulu. Yini embi ngokukholelwa kuNkulunkulu nangokufuna ukuba umuntu omuhle? Kungani bengangivumeli ukuba ngilandele uNkulunkulu uSomandla futhi ngihambe endleleni efanele empilweni? Iqembu labodeveli elakha uhulumeni we-CCP liphambene kakhulu impela futhi alinaNkulunkulu; liyizitha ezingenakubuyisana noNkulunkulu futhi ikakhulu liyizitha engingeke ngihlalisane nazo. Ekudabukeni nasekuthukutheleni kwami ngazithola sengicabanga ngamazwi kaNkunkulu uSomandla engqondweni: “Labo thathekile! Babonga umusa ngenzondo, bebelokhu bengamthandi uNkulunkulu, bemhlukumeza, bakhohlakele kabi, abamazi nokuthi uyini uNkulunkulu, bayamntshontshela futhi bamthuke, abasenawo nhlobo unembeza, abanawo ngisho nomncane umusa…. Ukuba kwabo ogaxekile kushiye bonke abasezulwini besesimweni sobumnyama nesiyaluyalu! Ingabe inkululeko yenkolo? Ingabe amalungelo nezinto ezithandwa izakhamuzi? Konke kungamacebo okumboza isono! …Izinkulungwane zeminyaka yenzondo zigxile enhliziyweni, izinkulungwane zesono zisenhliziyweni—kungahlala kanjani lokhu kungayikhuthazi inzondo? Kuphindiselele uNkulunkulu, kubuqede bonke ubutha, ungabe usakuvumela, ungakuvumeli ukuba kudale ezinye izinkinga njengoba kufisa! Manje isikhathi: Umuntu ubelokhu eqoqa amandla akhe, unikele ngayo yonke imizamo yakhe, wakukhokha konke, ngenxa yalokhu, ukuze embule ubuso bamademoni futhi avumele abantu, abenziwe izimpumputhe, wabekezelela lonke uhlobo lokuhlupheka nobunzima, ukuze aqede ubuhlungu futhi ajikele lo develi omdala omubi” (Umsebenzi Nokungena (8) kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Kulawa mazwi kaNkunkulu ngaqonda intando Yakhe, kwase kuvuka kimi inzondo ebabayo yalabo develi. UNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba nazo zonke izinto futhi unakekela isintu; isintu sijabulela insada enkulu kaNkulunkulu, futhi ukukholelwa kuNkulunkulu nokukhulekela uNkulunkulu bekulokhu kungumthetho weZulu nesimiso somhlaba. Kodwa nokho uhulumeni we-CCP wenza konke ongakwenza ukuba ucindezele ngonya labo abakholelwa kuNkulunkulu uSomandla; ubazingela kakhulu, ubabophe ngokungafanele, ubahluphe futhi ubahlukumeze ngonya, ubavalele emakamu okufukuza futhi uyabathuka futhi uhlekise ngabo, ngethemba lokuthi uzoqeda bonke labo abakholelwa kuNkulunkulu futhi uqede umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa umuntu ezinsukwini zokugcina—mubi ngempela futhi wenyanyeka ngokwedlulele! Kule minyaka edlule, ukube uNkulunkulu uSomandla akangivikelanga futhi wanginakekela, ngabe kade ngabulawa ngonya uSathane udeveli. Ngibhekene nale mpi engokomoya yokuphila nokufa, ngiye ngazimisela: Kufanele ngimelele iqiniso futhi kufanele ngithande uNkulunkulu ngisho noma ngibhekene nobuhlungu obukhulu, futhi ngifunga ngokuphila kwami ukuba ngifakaze ngoNkulunkulu!
Ukungibona ngibabheka ngaphandle kokusho okuthile, amaphoyisa amabi abhavumula ngokuthukuthela: “Akukho ozokukhuluma? Linda kuze kube yilapho kufika abaphathi bethu ukuze kube yibo abakuphenya ngemibuzo, futhi sizobona ukuthi umlomo wakho uzohlala uvalekile yini!” Ukuzwa ukuthi izikhulu zamaphoyisa amabili zizongiphenya ngemibuzo, ngazizwa nginokwesaba okuncane. Kodwa ngacabanga indlela engiye ngaba ngayo ngempela ebunzimeni bobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwakho konke kanye nokuphatha Kwakhe zonke izinto, nanendlela amazwi kaNkulunkulu anobukhosi obuyingqayivele ngayo namandla omdlandla, futhi lapho kwavuka masinyane ngaphakathi kwami ukholo nesibindi sokunqoba amabutho obumnyama kaSathane. Nakuba lawa maphoyisa amabi anonya olwedlulele kanye nesihluku, amane ayizinto ezingenamsebenzi—abonakala eqinile ngaphandle kodwa ngaphakathi abuthakathaka—futhi aphinde asetshenziswe yizandla zoMdali. Enhliziyweni yami, isinqumo sami kuNkulunkulu saba khona: O, Nkulunkulu, noma ngabe odeveli bangihlupha kanjani, ngicela kuphela ukuthi usekele ukholo lwami, uqinise inhliziyo yami ethanda Wena, futhi ungivumele ngibe nobufakazi bokunqoba Kwakho ngisho noma kubiza ukunikela ngokuphila kwami. Kwakungaba ngemva kuka-10 ekuseni lapho kufika amadoda amabili azibiza ngokuthi angamaphini abaqondisi eMnyangweni Wezokuphepha Komphakathi. Bangibheka ngaphandle kokusho lutho, khona-ke omunye wabo wangibamba ngezinwele wase engicindezela ngemibuzo: “Usakholelwa kuNkulunkulu uSomandla?” Ngokubona ukuthi selokhu ngithulile, esinye isikhulu sephoyisa elibi sabhavumula ngokufutheka: “Uma ungakhulumi, sizokuzwisa ubuhlungu namuhla!” Njengoba esho lokhu, ebhavumula njengesilwane sasendle, wabamba izinwele zami, wangiphakamisa wase engiphonsa kude ngakolunye uhlangothi lwegumbi, futhi ngawa kabuhlungu kangangokuthi angikwazanga ukuphinde ngivuke. Base bengidonsa ngezinwele bangishaya futhi bengikhahlela, bememeza njengoba bengishaya: “Uzokhuluma?” Ngokuphazima kweso, ubuso bami babuvutha ngobuhlungu futhi isikhumba sekhanda lami saba buhlungu ngokungabekezeleleki sengathi sehlukaniswe phakathi. Lezi zilwane ezimbili ezazibonakala zembathise okwabantu nabahloniphekile ngaphandle, kodwa ngaphakathi zinobudlova nonya njengezilwane zasendle. Bangenza ngabona ngisho nangokucace ngokwengeziwe ukuthi leli qembu elibi lezombangazwe—i-CCP—linguSathane uqobo lwakhe, futhi izintunywa zalo yiqembu lamademoni nemimoya emibi! Ekugcineni bazohlangabezana nesiqalekiso sikaNkulunkulu! Laba baphathi ababili bamaphoyisa amabi babona ukuthi angizinikeli emandleni abo obushiqela, ngakho babamba izinwele zami futhi baqala ukungicindezela phansi njengokungathi sebelahlekelwe yizingqondo, bobabili besebenzisa izinyawo zabo ukungikhahlela ngonya nokunginyathela. Khona-ke bangidonsa bengiphakamisa base benginyathela ngonya ngemva kwemilenze yami, bangikhahlela kakhulu ngawela phansi ngakho ngaguqa phansi ngamadolo, futhi ngolaka bathi: “Guqa ngamadolo futhi ungahambi! Uyosukuma lapho usitshela iqiniso. Uma ungakhulumi, khona-ke ngeke ulokothe ucabange ngokuthi uzosukuma!” Uma ngike nganyakaza ngisho kancane, babedonsa izinwele zami ngobudlova futhi bangishaye bese bengikhahlela. Ngaguqa ngamadolo amahora amathathu noma amane, phakathi naleso sikhathi angibange ngisazi ukuthi bangishaya izikhathi ezingaki ngenxa yokuthi ngangingasakwazi ukuzibamba. Ekugcineni, ngikhungathekile ngawela phansi, futhi bangithethisa ngokuzenza sengathi ngifile, futhi ngokungayeki nangobudlova bebedonsa izinwele zami kangangokuthi isikhumba sekhanda lami kwakungathi sonke sidabukile. Ngaleso sikhathi, kwaba sengathi umzimba wami wonke uphahlazeke waba yizicucu—ngangingakwazi ukunyakazisa umsipha futhi ngisezinhlungwini ezingabekezeleleki. Ngezwa sengathi inhliziyo yami ingayeka ukushaya nganoma yisiphi isikhathi. Ngangilokhu ngicela uNkulunkulu ukuba anginike amandla, futhi izikhuthazo zikaNkulunkulu namazwi okungikhuthaza kwangena emgqondweni yami: “UPetru wakwazi ukuthanda uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni. Ngesikhathi eshona—ngesikhathi bembethela esiphambanweni—wayesamthanda uNkulunkulu; akazange acabange izithembiso zakhe noma amathemba aletha udumo noma imicabango ehlaphazekile, futhi wayefuna kuphela ukuthanda uNkulunkulu nokulalela wonke amalungiselelo kaNkulunkulu. Yilelo izinga okufanele ufike kulona ngaphambi kokuba uthathwe ngokuthi ubethulile ubufakazi, ngaphambi kokuba ube ngumuntu ophelelisiwe emva kokuba sewunqotshiwe” (“Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (2)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu anginika ukholo namandla: Yebo! UPetru wabethelwa ebhekiswe phansi esiphambanweni ngenxa kaNkulunkulu futhi walokhu ekwazi ukuthanda uNkulunkulu kakhulu ngisho nalapho inyama yakhe isebuhlungwini obungabekezeleleki. Wayinqoba inyama, wanqoba uSathane, futhi yilolu kuphela uhlobo lobufakazi obucacile nobungakwazi ukududuza inhliziyo kaNkulunkulu. Ngifuna ukulingisa uPetru, ukuze uNkulunkulu akhazimuliswe ngami. Nakuba inyama yami esebuhlungwini obukhulu, isengaphansi kwalokho uPetru akuzwa ngesikhathi ebethelwa ebhekiswe phansi esiphambanweni. USathane ufuna ukungenza ngikhaphele uNkulunkulu ngokuthi ahluphe inyama yami, kodwa uNkulunkulu usebenzisa leli thuba ukuze aphelelise uthando lwami lweqiniso Ngaye. Namuhla, ngokuqinisekile ngeke ngizinikele kuSathane futhi ngivumele iqhinga lakhe liphumelele! Ngifuna ukuphilela ukuthanda uNkulunkulu! Ngokuphazima kweso, ngase ngingakwesabi noma yikuphi ukufa; ngaba nokuzimisela ukuthi ngizinikele kuNkulunkulu ngokuphelele futhi ngafunga ngokuphila kwami ukuthi ngizokwethembeka kuNkulunkulu! Ngabe, sengithandaza kuNkulunkulu: “O, Somandla Nkulunkulu, ngiyisidalwa esidaliwe esikhonza Wena nesilalela Wena njengoba kufanele. Ngikunika ukuphila kwami, futhi noma ngabe ngiyaphila noma ngiyafa, ngikholelwa Kuwe futhi ngithanda Wena!” Ngokushesha ngezwa kunqamuka ubuhlungu emzimbeni wami, futhi umzimba nengqondo yami yonke kwaba nomuzwa wokukhanyiseleka nokukhululeka. Ngalesi sikhathi, ngazithola sengivungazela enhliziyweni yami iculo lokuhlangenwe nakho: “Namuhla ngenxa kaNkulunkulu, yizwa ubunzima; kusasa thola izibusiso zikaNkulunkulu. Ngenjongo yokubona usuku lapho uNkulunkulu ethola inkazimulo, ngidela ubusha nokuphila kwami. O! Thando lukaNkulunkulu, jabulisa inhliziyo yami. Ngizwa kunzima ukushiya Yena. Ngizwa kunzima ukwehlukana Naye. Ngizophuza indebe ebabayo. Kunokuphila impilo yami ngomunyu. Ukuhlaziswa noma ukoniwa, ngizokhokhela uthando lukaNkunkulu konke ukuphila kwami” (Ngifisa Ukubona Usuku UNkulunkulu Athola Ngalo Inkazimulo” Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Abaphathi bamaphoyisa amabi babekhathele beyingcuba ngokungihlukumeza, futhi bema lapho bengasho lutho isikhathi eside. Ekugcineni, bengazi ukuthi kufanele benzeni, bangikhaca bethukuthele: “Ake ulinde!” Khona-ke bahamba. Amanye amaphoyisa amabi axoxa ndawonye emile: Lo wesifazane uqine kakhulu, akakho ongenza okuthile ngaye. Uqine ukwedlula uLiu Hulan….”[a] Kulelo qophelo, ngakhuthazeka kakhulu kangangokuthi ngehluleka ukubamba izinyembezi zami. UNkulunkulu wayenqobile! Ukube kwakungewona amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayengisekela njalo njalo, futhi ukube kwakungeyena uNkulunkulu owayengisekela ekusithekeni, ngangingeke nhlobo ngikwazi ukuma ngiqinile. Yonke inkazimulo nodumo kuya kuNkulunkulu uSomandla! Ekugcineni, amaphoyisa amabi angivalela ejele.
Ejele, amaphoyisa amabi ayelokhu engadelile, futhi ayengiphonsa imibuzo kanye njalo ngemva kwezinsuku ezimbalwa. Ngaso sonke isikhathi uma bengibuza imibuzo, babengihlalisa phansi egumbini lokuphenywa ngemibuzo ngaphambi kwefasitela elinezinsimbi ezivundlile, futhi njalo uma bezizwa bengeneliseki ngempendulo yami, babesondela futhi bangishaye ngobudlova ebusweni bani noma bangibambe ngezinwele zami bese bephushela ikhanda lami ezinsimbini ezivundlile. Ngokubona ukuthi selokhu abatholi lutho, bahlanya ngentukuthelo. Ekugcineni, babona ukuthi ukuqina kwabo kimi akusizi ngalutho, ngakho baphendukela emaqhingeni athambile futhi bezama ukungiheha nokungincenga, bethi: “Izingane zakho nomyeni wakho bonke balindele wena ekhaya! Futhi umyeni wakho ukunxusele kithina. Khuluma nathi futhi masinyane uzobuyela emuva bese uhlangana nabo.” Lawa mazwi amanga anginenga futhi angenza ngawazonda kakhulu kangangokuba ngacela kuNkulunkulu enhliziyweni yami ukuba abaqalekise. Ngangilenyanya leli qembu elonakele nelihlazisayo lamaphoyisa amabi. Kungakhathaliseki ukuthi benzani, ngangingeke ngihlehle ngisho nakancane! Kulokhu kuphila, akakho ongazamazamisa ukuzimisela kwami ukulandela uNkulunkulu uSomandla! Ekugcineni, amaphoyisa amabi ayesebenzise onke amaqhinga awo, futhi angigcina ngivalelwe izinsuku ezingama-40, angihlawulisa ama-yuan ayi-2000 ase engidedela.
Kukho konke engihlangabezane nakho kuze kube namuhla, kukho konke, ngiye ngafinyelela ekuboneni ngokujulile ukuthi umuntu onjengami—owesifazane ojwayelekile wasemaphandleni, ngaphambilini owayengenakho ukuqonda noma isibindi—anganqoba ezikhathini ezimbalwa zokuhlukunyezwa ukuba avume nangokuhlushwa ngonya kanye nokulinyazwa amaphoyisa e-CCP, angabona ngokucacile isimo esiphikisayo sikahulumeni we-CCP omelana ngenkani noNkulunkulu futhi olimaza ngonya abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, ubone ngokucacile ukwenza kwawo okwenyanyekayo okudukisa umphakathi ukuze wamukele ukuma kwawo nokufihla izindlela zawo ezimbi, futhi lokhu kungemisebenzi nangamandla kaNkulunkulu amangalisa ngokuphelele. Kulokho engihlangabezane nakho okungokoqobo, ngiye ngafinyelela ekwaziseni igunya namandla amazwi kaNkulunkulu amakhulu kakhulu, ukuthi amandla uNkulunkulu awanikeza umuntu awapheli nanokuthi anganqoba onke amabutho kaSathane amabi! Ekuhlukunyezweni, ngibone ukuthi amakha othando lukaNkulunkulu agcina inhliziyo yami imsulwa futhi ingenakho ukonakala ngazo zonke izikhathi, futhi lungisize ukuba ngingalahlekelwa yindlela yami. Kungakhathaliseki ukuthi ngingaba kuphi noma yiluphi uhlobo lwezimo engizithola ngikulo, uNkulunkulu njalo ungibhekile, futhi uthando Lwakhe lunami njalo. Kuyilungelo lami ukuba ngikwazi ukulandela lokhu ngokoqobo, uNkulunkulu weqiniso, kanye nokuthi ngikwazi ukubona lolu hlobo lokushushiswa nobunzima futhi nginambithe ukumangalisa kukaNkulunkulu, ukuhlakanipha Kwakhe kanye nobuninimandla onke Bakhe nangaphezu kwalokho kuyinhlanhla yami. Kusukela manje, ngizokwenza konke engingakwenza ukufuna iqiniso futhi ngifinyelele ulwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu kuze kube sekugcineni, nokuba ngingantengantengi ebuqothweni bami!
a. ULiu Hulan wayeyimpimpi eyintombazane eseminyakeni yobutshitshi eyayisebenzela amaKhomanisi ngesikhathi sempi yangaphakathi eShayina ngawo-1940. Akazange asinde empini, kodwa kamuva wakhangiswa njengophawu lokuzinikela nokuba nesibindi yiQembu lamaKhomanisi, futhi wadunyiswa njengeqhawekazi.
Okwedlule: Uthando LukaNkulunkulu Lwalunami Ejele Elimnyama LikaDeveli
Okulandelayo: Amandla Okuphila Angenakuqedwa